ज्योति मगर प्रकाश सपुतले लेखेको कविता सुनेर यसरी धर’ धरी रो’इन् -हेर्नुहोस (भि,डियो सहित) – Ap Nepal
उत्सव रसाइलीले तयार पारेको कार्यक्रममा युट्युबशोमा गाएक प्त. र गायिका ज्योति मगर अतिथि थिए सो कार्यक्रमका कुराकानी चल्दै गर्दा प्रकाशले भनेका थिए
आज भन्दा चार पाँच वर्ष अगाडि ज्योति दिदीको नराम्रो कुराहरूको बढी चर्चा भै रहँदा मैले कविता लेखेको थिए कार्यक्रम संचालकले सुनाइदिनु भनेपछि सुनाएका थिए सुनेर आफूलाई समाल्न नसक्ने गरी भावुक भइन् ज्योति। लोक गायीका तथा कलाकार ज्याती मगरलाई निकै बिन्दास महिलाका रुपमा हेरिन्छ ।
उनी गायनमा मात्र नभएर नाचमा पनि उत्तिकै पारंगत छन् । उनले एक नाच प्रतियोगीमा पनि निकै राम्रो प्रतिभा देखाइन् । उनी गीत गाउँदा संगै स्टेजमा नाच्छिन् । त्यसैले पनि उनको माग यस्ता कार्यक्रमहरुमा हुने गर्छन । तर निकै फरासिली र बोल्न नहिचकिचाउने ज्यातीले ब्यक्तिगत जिवनमा भने सोच्ने नसकेका घटना भोगेकी छन् ।
आफुलाई अलिकति भाग्यमानी भएको ठान्ने ज्योती आफु निडर भएका कारण हतोस्तसाही नभएको बताइन् ।
उनले भर्खर काठमाडौ आउँदा देखि नै काम पाएका कारण आर्थिक रुपमा समस्या भोग्न नपरे पनि कामलाई नराम्रो सोचेर आफु माथि राख्ने भनाईले कहिले काँही निकै चित्त दुखेको बताएकी छन् ।
बाँकी तलको भिडियोमा हेर्नुहोस..
Prevआज बढ्यो डलर सहित यी बिदेशी मुद्राको भाउ -हेर्नुस कुन देशको कति ?
Nextतपाँईलाई थाहा छ ? पसलमा किन झुण्ड्या, इन्छ कागती र खुर्सानीको माला ? यस्तो छ कारण…
पिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिं,दैन ? (33128)